Obbo Laammaa Megersa maalii-fi aaranii? Ilala kun WBO fii polisiin Oromiyaa waliin jiru – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsObbo Laammaa Megersa maalii-fi aaranii? Ilala kun WBO fii polisiin Oromiyaa waliin jiru
Obbo. Laammaa Megersa maalii-fi aaranii? Ilala kun WBO fii polisiin Oromiyaa waliin jiru!!!
#Jawar_Mohamed torbee as deemaa jiru kana keessaa imala isa gara lixa Oromiyaatti taasisuuf Obb Baqqalaa Garbaa waliin akka qophiira jiran dhaga’amaa jira. Dhimmoota kana bakka gurguddaa lamatti Qoodnee ilaaluun barbaachisaadha
1) Humni gara lixaa kana jiru OPDO baay’ee waan yaaddesseef shira xaxuuf deema ta’a.
Jawaraa Mohaamed as gahuu qabsoo oromoo keessaa gahee guddaa qabaachuun waan haalamu miti. Haa ta’u malee Jawaar ABO akka hin jaalanne namni haaso’aa fi gochaa isaa ka’umsa isaa irraa kaasee tilmaamuun ni danda’ama.fkn dhimma qorannoo isaa mata duree “OLF beyond repair” kan jedhu keessatti akka waan ABO fi WBO badeetti akkasumas akka walittti suphuun hin danda’mnetti dhiiyeessuu isaa, haasawaa isaa keessaatti midiyaa harkaa qabuu OMN waraanni bilisummaa oromoo akka hin jirree fi kan jirus fafaca’ee akka jiru innis lama sadii akka hin caaletti qeerroo fi Uummata Oromoo gama waraanaan abdii akka kutachiisaa ture ni beekama. namni kana hin beekne yoo jiraates YouTube irraa argachuu akka danda’u ifa galaa dha. Garuu ABO fi WBO akkasitti yeroo arginu jibbinsa dhaaba kana irraa akka qabu ifatti mirkaneeffaneerra. Biyyoota garaa garaa keessaatti mallaqa garagaasaa jechuun akka walitti qabaa turee fi WBO’f kophee tokko akka bitee hin beekne, Marii ABO biyya garaa garaa irratti gageefamu irratti ijoolleen garee isaa ta’aniin jeequmsa akka garaagraa irratti akka kaasniif yaala tures waanuma argaa ture, walumaa galatti Jawaar akka WBO fi ABO hin jaalanne ifa. Ammas shira garaagaraa xaxee kamaal Galchuu fi dhaabota ABO keessaa foxxoqanii bahan waliin akka OPDO’n hojjechuu qabdu dursee kan haala mijeessaa tures isuma. kun ammoo gama kamiin ABO fi WBO balleessuf jecha kan yaadamedha. Kaanafu Adeemsi gara lixaa shira OPDO waliin xaxanii haala uummata achii hubachuun WBO fi ABOtti duuluu waan malaniif uumanni lixaa gama kamiinuu iccitii isaa qabachuu qaba jenna Shira kana kan ibsu ammoo dhiyeenya kanaa kaasee jawaar sobee OPDO arrabsuu fi ABO, WBO jajuun isaa shira akka ta’e hubadhaa.
2) Uummanni gara lixaa gara fuula duraatti iccitii isaa akka hin barreef dubbisuuf kan deemu ta’uu danda’a.
Dhuma irratti gama kamiinuu karaa nagaa deemee haa deebi’u simadhaa Iccitii keessan garuu cimsaa cimsaa dhokfadhaan dhaamsa kooti.
Haqa dhokatoo fi shira Siyaasaa yeroo warri qaaman arganii fi dhagahan saaxilan akka armaan gadiiti!
Marii Jaal Kamaal Qalbeessaa ajajaa jajjabee WBO duraanii fi miseensa Gumii Sabaa TV ONN irratti
Dhimma Lixaa ilaalchise
” 1. Kan shira xaxee ABO balleessuuf hojjechaa jiru OPDO.
2. OPDOn waanti isheen Miidiyaatti afaan dammaan dubbattuuf hojii isheen qabatamaatti hojjechaa jirtu gargari.
3. Dhimma Beenishaangul Gumuz irratti WBOn ha lolu jennan nutu biyya eega isin hin galchu jedhan. Nutti garuu daqiiqaa 30 nutti hin fudhatu. Garuu mootummaatu harka keessaa qabaaf callisan.
4. Shira mootummaan kun xaxaa jiran ragaa viidiyoodhaan qabna. Ammayyuu diraamaa viidiyoo qopheessanii jiru gadi ba’uu isaa ABOn eegaa jira
5. Jaal Marroon ABO dha WBOdhas. Jaal Marroon waraana WBO miti qofaatti ijaarrate kan jedhu olola OPDOn akka ABO fi WBOn wal diiguuf afaanfajjii uumteedha. Kijiba wal hin dhabne wal hin dhabus.
Lammaa fi warrior Lammaa fakkaatu WBOn akka waraana addaatti akka ijaaramu hin barbaanne?
6. Eenyutu hiidhachisee eenyutu hiikkachiisa dhumnu lafarraa dhumna malee
7. Nuti obsa guddaan araarri kun akka hin gufanneef taa’aa jirra. gaafa obsa keenya fudhanne # fiishkaa tokko qofa afuufuutu nu ga’a. Dubbii wal galcha
8. Kan araara kana gufachiisuuf barbaadu Obbo Lammaa fi kittillayyoota isaaniiti.
9. Lammaan akka ABO hin barbaanne marii kaabinee isaarratti dubbateera.
10. Jaarsoliin dhiha deeman jedhan jaarsummaa hin deemne. dhimma lixa Oromiyaa irratti namoota naannoo dubbisuuf deeman. WBOs achumaan dubbisan.
11. ABO/WBOn kan uummata Oromoo hundaati hin badu. Haala Qabsoon amma gufatuuf deemuuf qeerroon ,qarreen hawaasni hundi gama hundaan qasoof of qopheessaa. WBOn tasuma hin hiikkatu.”
Elaamee….Shira Jawar fi Hima Oromiyaa Lixaa!
Himalli JSM (Xawalwwaallichaafi) Bekele Gerbaa waan #Naqamtetti raawwatamu natti fakkaata. Kana duras Ijoolleen #GInciitti shirasaaf gaafa huutee morma qabdu warri #Amboo gadi nuuf dabarsaa jedhan. Warri #Amboos kabajakeen deemi nurraa jennaan Gudar dhaqu malee jedhee watwwaate. Gaafa ijoolleen Gudaritti qophaa’anii eegggatan gidduutti ofirratti alba’uuuf ka’ee ‘Finfinneetti hojiifan barbaadame’ jedhee ofirra deebinaan Qeerroon kofalaa turan. Ammas dubbiin sanuma. #Naqamtumatti hojiif #Finfinneerraanabrbaadan jedhee ofirra galagaluunsaa hin oolu. Yeroo darbetti uummata #Arsiiqindeessee #ABO irratti hololchiisaa biyya sabboontota keessaa kijibaafi fakkeessa kuntaalaan guuree waan adeemu hinfakkaatu..
Leenci Oromoo Arsii Abbaan Badhaadhaa Dhaqqabaa Waario ammoo haala miidhagaa kanaan jala dhaabbate. Hanaga ammaattii JSM shira hedduu xaxee WBO/ABO jaamsuuf dalagaa jira…wacuma sagalee qallaa sanaan waa baayyee borceera!!
#NAKAMTEE,#GIMBII #NAJJOO #DAMBI_Doolloo(QEERROO)WAKE UP!!
Waggaa meeqa guutuu ABO balleessuuf nama hojjechaa ture fi ABOn badeera jedhee kan afuufaa ture,amma immoo ergama OPDO fudhatee gara Wallaggaatti qajeeluuf ka’eera!
Waan hojjechaa ture waan beekuf sodaa irraan kan ka’e #BaqqalaaGarbaaofitti maxxansee dhufuufidha.
Namittiin kun basaastuu OPDO fi diina #WBOdha eeggadhaa ijoolleen lixaa.
Halkanii guyyaa midiyaa isheerratti Shanee ,shanee jettee arraabsiisaa fi arrabsaa nama ture ergama diinaa qabattee dhufti malee waan hojjettu hin qabdu.
Siyaasa taanaan isheenuu barattee galti malee nama hin barsiiftu.
Hundaafuu ofirraa eegaa harka dheereeffachaa jirti gara lixaa kanatti.
Osoo kana booda Oromoo fi Oromiyaan abdii qabdi jennu Lammiilee keenya ammas Buqqa’aa jiran
Ilala kun WBO fii polisiin Oromiyaa waliin jiru.hogganni/dabballoonni OPDO polisoota Oromiyaa akka WBO waraanan ajajanillee nuti oboleeyyan keenyaan hin lollu jachuun baayyeen isaanii mormaa jiran.
Kanafi Obb. Laammaa Megersa maalii-fi Aree laata?
“Muudama jidduu kana godhamaa jiru yoo laallu ODP’n gara OPDO deebi’aa akka jirtu waan akeeku fakkaata.
– Ibraahim Haajii komishinarii poolisii Oromiyaa yeroo turetti kan Irreecha irratti ummata ficcisiise torban dabre Bulchaa godina Baalee godhanii muudan
– Addisuu Qabbaneessaa, kan gaafa mana murtii Godina Shawaa Kibba Lixaa turetti Qeerroo dararaa waan tureef aangoon dabalameefi pirazidantii mana murtii waliigalaa ta’ee muudame, achittin dehininatii waliin qabsoo laamshessuuf abbootii murtii dararaa akka ture ni yaadatama. Yakki isaa kun saaxilmanaan obbo Lammaan aangoo irraa kaasuun ni yaadatama. Amma ammoo Itti Aanaa Ministeera baqattootaa ta’ee muudameera.
– Komaandar Tasfaayee Ashinee kan Shawaa Lixaatti waggoota dheeraaf ummata keenya ficcisiisaa ture, poolisii federaalaatti hogganaa qorannoo yakkaa ta’ee muudame jedhan.
– Kanneen biroo heddu tarreessuu dandeenya.
Otuu seerri jiraatee; jarri kun yakka ummata keenya irratti hojjataniif hidhaatti darabatamuu osoo qabanuu aangoon badhaafamuun raajiidha. Haala kanaan jijjirama gara fuulduraa osoo hin taane duubatti oofamaa jira. Gara duubaa deemuun ammoo qileetti kufuu fida.”
Sirni Awwaalchaa Qeerroo Heenook Baqqalee 11/11/2018